अमेरिकी जातीय विभेदमा पश्चिमा मुलुकका नेता किन चुप? - Nepal Readers
हालै अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्या भएपछि देखिएको विरोध प्रदर्शन अमेरिकाभरी फैलिरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समूहले अमेरिकाको जातीय विभेदमाथि निन्दा गरिरहँदा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारबारे सधैँ चर्चा गर्ने केही पश्चिमा मुलुकका नेता चुप लागेका छन्। किन यस्तो अवस्था देखियो?
अमेरिकी नेताले विरोधीमाथि सैन्य कारवाही गर्ने धम्की दिएकोमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई कस्तो लागेको छ भन्ने प्रश्नमा २२ सेकेन्ड मौन रहनुभयो। कुनै जवाफ दिनुभएन र आफ्नो ध्यान क्यानाडामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहनसनले उक्त कार्यको एक हप्तापछि मात्रै सम्बन्धित टिपण्णी गरी जातिवाद र जातिवादको हिंसा बेलायतमा देख्न पाइँदैन भन्ने कुरा मात्रै बताउनुभयो। जसबाट ती पश्चिमी राजनीतिज्ञहरू अमेरिकी राजनीतिज्ञको चाकडी मात्रै गर्छन् भन्ने देख्न सकिन्छ।
वास्तवमा केही पश्चिमा मुलुक अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका छन् त्यसैले अमेरिकी हित विपरीत धारणा देखाउन साहस गर्दैनन्। विशेष गरी केही वर्षयता आर्थिक, व्यापारिक, सुरक्षालगायत विषयमा अमेरिकाको दबावपछि उनीहरूको कथित संरक्षक अमेरिकामाथि अझ डर लागेको छ। जातीय विभेद जस्तो स्पष्ट रूपमा न्याय विपरीत कार्य देखिए पनि चुप लागेका छन्।
पुँजीवादको सुरूवात प्रमुख पश्चिमा मुलुकको उपनिवेशवाद चलाउने कालो इतिहास छँदैछ जुन विश्व जातीय विभेदको प्रमुख स्रोत पनि हो। हाल बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायत पश्चिमा मुलुकमा सामाजिक प्रणाली, आर्थिक भेदभाव आदि कारणले अश्वेत र अल्पसंख्यक जातिमाथि अन्याय प्रचुर देखिँदै आएको छ। तर स्वदेशको जातीय विभेद समस्याको समाधान गर्न कुनै उपाय नभएका ती राजनीतिज्ञले अरू देशमा जातीय विभेदको भावनालाई उत्तेजित गरी विकासोन्मुख मुलुकलाई बदनाम गर्न रातदिन खटिरहेका छन्।
जातीय विभेद अमेरिकी समाजको पुरानो रोग हो साथै पश्चिमा मुलुककका लागि साझा लज्जाको विषय पनि हो। महामारी विरूद्धबारे अमेरिकाबाट सिकेका केही पश्चिमा मुलुकले जातीय विभेदबारे चाहिँ अमेरिकासँग अरू नसिके हुन्थ्यो।सीआरआइ अनलाइन